के तपाई सवारीसाधन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? किन्नु अघि थाहापाउनुस् यी १२ तथ्य « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
के तपाई सवारीसाधन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? किन्नु अघि थाहापाउनुस् यी १२ तथ्य
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १६:११
काठमाडौं : भोल्टस्, वाट्स, एमपिएस (mps)जस्ता प्राबिधिक शब्दहरुले तपाईंलाई धेरै अल्मल्याउँछ होला । तपाईंलाई केडब्लुएच (kwh) र केडब्लु (kw) जस्ता ‘जार्गन’ले पनि तनाव दिन्छन् होला ।
तर, केही छैन, इलेक्ट्रिक भेइकलका (ईभी)बारे बुझ्न तपाईंहरुको सजिलो हुने गरि हामी यहाँ त्यस्ता कही आधारभुत शब्द र अवधारणाका बारे चर्चा गर्दैछौं । ईभी अटो क्षेत्रको पछिल्लो क्रान्ति हो, जसले १ सय ३३ बर्ष लामो इतिहास भएको यो क्षेत्रलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ ।
संसार शुरुमा सोचिए वा अनुमान गरिए जस्तो इलेक्ट्रीक दुनियाँमा तिब्र गतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था भने होइन । अझै केही कठिनाईहरु छदैंछन् । तर, भिक्टर ह्गोले भने झैं, ‘यदि कुनै पनि सोच वा बिचारको उपयु्क्त समय आइसकेको छ भने त्यसलाई कसै पनि रोक्न सक्दैन ।’ त्यसैले इभीको समय आइसकेको तथ्यलाई नकार्न सकिदैंन ।
हामीले यहाँ ईभीका बारेमा निरन्तर सोधिने प्रश्नहरुका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
ईभीका आधारभुत पुर्जाहरु के-के हुन् ?
सरसर्ती हेर्दा ईभीको बनोट जटिल देखिदैंन । तिनमा बिजुली स्टोर गर्ने ठाउँ हुन्छ, जुन सामान्यतया ब्याट्री भित्र हुन्छ । र, इलेक्ट्रीक मोटरको रुपमा चक्कासम्म उर्जा प्रवाह गरि गुड्ने बनाउने यन्त्र हुन्छ । गाडीमा बिजुली ग्रिड वा पेट्रोल इन्जिन जस्ता अन्र्तनिहित स्रोतको माध्यमबाट आपुर्ती गरिन्छ ।
ईभीमा कस्ता खाले मोटरका प्रयोग हुन्छन् ?
अहिले ईभीमा दुई खाले मोटरको प्रयोग भइरहेको छ । डिसी (dc) मोटर चल्तिको छनोट हो, जुन बिशेष गरि दुई पाङग्रे र इलेक्ट्रिक कारहरुमा प्रयोग हुन्छ । यसमा चुम्बकीय क्षेत्रको निर्माण गर्न दुई वा सो भन्दा बढि चुम्बकको प्रयोग हुन्छ । चुम्बकीय क्षेत्रले गाडी गुड्न मद्दत पुयाउँछ ।
निकोला टेस्लाले सन् १८८९ मा आबिष्कार गरेको एसी (ac) इन्डक्सन मोटर ईभीहरुमा प्रयोग हुने अर्को प्रकारको मोटर हो । यो मोटरमा स्थायी चुम्बक हुँदैन तर पनि यसले बिद्युतिय र चुम्बकिय क्षेत्रको निर्माण गर्न उत्प्रेरणा जगाउँछ ।
इन्डक्सन मोटरहरु ब्याट्रीबाट निक्लेको ‘डाइरेक्ट करेन्ट’को माध्यमबाट सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् । तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन एसी (ac) वा ‘अल्टरनेटिभ करेन्ट’को आवश्यकता पर्छ । यो समस्याको समाधान इन्भर्टरको प्रयोगबाट सुल्झाउन सकिन्छ । र, यसका धेरै फाइदाहरु पनि छन् । उदाहरणको लागि, गति नियन्त्रण ।
ईभीमा कतिवटा मोटरको प्रयोग हुन्छ ?
यो चाहीँ गाडी पिच्छे फरक हुन्छ । ‘फ्रन्ट ह्वील’ गाडीमा मोटर अगाडि राखिएको हुन्छ भने ‘रियर ह्वील’ गाडीमा पछाडि । अगाडी पछाडि नै मोटर राखिएमा यसले गाडीलाई ‘अल-ह्वील’ ड्राइभ बनाउँछ । केही शक्तिशाली गाडीमा भने मोटर प्रत्येक चक्कामा राखिएका हुन्छन् ।
बिशिष्ट (डेडिकेटेड) ईभी र सामान्य ईभी एकआपसमा कसरी फरक छन् ?
सामान्य गाडीमा इन्जिन, ‘ट्रान्समिसन’ र इन्धन ट्याङकीको लागि ठाउँ हुन्छन् । तर, ईभीमा यस्ता ठाउँहरु छुट्याइएका हुँदैंनन् । तिनमा छोटा र साना ‘बोनेट’ हुन्छन् । पाङ्ग्राका बीचमा फ्ल्याट ब्याट्री प्याकका लागि ठाउँ छुट्याइएका हुन्छन् र इन्धन ट्याङकीको लागि कुनै ठाउँ हुँदैंन । नतिजा स्वरुप, ठाउँहरु खेर जाँदैनन्, थोरै बस्तुहरुको प्रयोग हुन्छ र गाडीको आयु बढ्छ ।
केडब्लु (kw) र केडब्लुएच (kwh) का बिचमा के फरक हुन्छ रु कुन ब्याट्रीका लागि र कुन चार्जरका प्रयोग हुन्छ ?
केडब्लु (kw) भन्ने इकाई शक्तिको मापन हो । ईभीको ब्याट्रीमा आपुर्ती हुने शक्तिको (पावर) मापन यो इकाइ द्धारा गरिन्छ । अर्कोतर्फ केडब्लुएच (kwh) बिद्युतिय उर्जाको मापन हो ।
ब्याट्री बिभिन्न प्रकार र अवस्थामा आउँछन् । ईभीमा कुनको प्रयोग हुन्छ र किन ?
ब्याट्री सेलमा ‘पोजिटिभ इलेक्ट्रोड’, ‘नेगेटिभ इलेक्ट्रोड’ र ‘इलेक्ट्रोलाइट’ समावेश हुन्छन् । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो की सामान्य गाडीमा ‘लिड-एसिड’ ब्याट्रीको प्रयोग हुन्छ र केही हाइब्रिडमा भने ‘निकेल मेटल हाइड्राइड’ ब्याट्रीको प्रयोग हुन्छ । अहिले ईभी उत्पादकहरुले भने ‘लिथियम आयोन’ ब्याट्रीको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
स्मार्ट फोनमा प्रयोग हुने ‘लिथियम आयोन’ ब्याट्री एकाध बर्षमै बिग्रन्छ । के ईभीमा पनि यस्तै हुन्छ ?
हुँदैन । किनभने सबै ‘लिथियम आयोन’ ब्याट्रीहरु उस्तै पाराले बनाइएका हुँदैनन् । त्यसमा प्रयोग हुने धातुले यसमा फरक ल्याउनुका साथै आयुसमेत निर्धारण गर्छ । फोन मानिसले यसै पनि केही बर्षमै फेर्ने हुनाले यसको ब्याट्री केही सघन हुन्छ र आयु छोटो हुन्छ ।
‘लिथियम आयोन’ ब्याट्रीले कत्तिको ‘ड्राइभिङ रेञ्ज’ (माइलेज) दिन्छ ?
माइलेज ब्याट्रीको आकार र रसायन, गाडीको तौल, चालकको चलाउने तरिका आदि कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले महिन्द्रा इटुओले ११ केडब्लुएच (kwh) को ब्याट्रीबाट १ सय १० किलोमिटर माइलेज दिदैं गर्दा हुन्डाई कोनाले ३९.२ केडब्लुएच (kwh)को ब्याट्रीबाट ३ सय ५० किलोमिटरको माइलेज दिइरहेको छ ।
ईभीमा गियर किन हुँदैन ?
गाडी स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यो ‘फुल’ शक्तिका साथ सञ्चालन हुने हुँदा गियर परिर्वतन गरिरहन आवश्यक पर्दैन ।
गाडीको ब्याट्री किन महङ्गो हुन्छ ?
फोनको ब्याट्री तुलनात्मक ढंगले सानो हुन्छ । करिब २ सय ग्राम जतिको । तर, गाडीको ब्याट्री ५ सय किलोग्राम भन्दा गह्रौं हुन्छ । तर, ईभीको प्रयोग बढेसँगै ब्याट्रीको लागत कम हुँदै जानेछ ।
के इभी साँच्चै पर्यावरण मैत्री हुन् ?
यो सत्य हो कि ईभीले शुन्य उत्र्सजन गर्छन् । तर, यिनले आफैं उर्जा उत्पादन नगर्ने हुनाले उर्जाको स्रोत कत्तिको पर्यावरण मैत्री छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । खुसीको कुरा नेपालमा उत्पादन हुने १०० प्रतिशत बिजुली पर्यावरण मैत्री रहेको छ ।
ईभीहरु कसरी चार्ज गर्ने ?
धेरै इभीकोे ब्याट्री एसी (ac) र डिसी (dc)को माध्यमबाट चार्ज गर्न सकिन्छ । एसी ९बअ० स्टेशनहरु सामान्यत घरमै हुन्छन् र यहाँ चार्ज गर्न केही बढी समय लाग्छ । डिसी ९मअ० चार्जिङ स्टेशनको माध्यमबाट भने गाडी चाँडै चार्ज हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १६:११
काठमाडौंबाट आज ११ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै
अर्घाखाँची जिल्लामा दश हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बाली सलहले नष्ट गरेको छ ।
बझाङको केदारस्युँमा पहिराले १७ घर पुरिए, ७ जना बेपत्ता
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थित बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसीमा पहिरो जाँदा १७ घर पुरिए र सात जना
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पार्टी फुटिसकेको बताएका
ब्राजिलमा एकैदिनमा ४८ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित
ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट एकैदिनमा ४८ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले बिहीबार अबेर
बझाङको केदारस्युँमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये ४ जनाको शव भेटियो
कोरोनाका कारण २८ वर्षपछि बोलबम धाममा जलार्पण यात्रा स्थगित